Ukusetyenziswa kwe-BIG ye-SMALL Neutron III
I-neutron yokukhusela i-Borated Polyethylene Sheets
CNC Iqhubekekisiwe Borated Polyethylene Izahlulo
Amanye amaphepha e-UHMWPE kunye ne-CNC eqhubekileyo
Iindlela zethutyana zendlela
Kwimifanekiso ye-neutron, i-neutron kufuneka icothiswe kwisantya esifunekayo kwimifanekiso emva kokuba ivelisiwe. Isantya se-neutron sichaphazela ubunzulu bokungena kunye nomfanekiso wokugqibela, ukuvumela ukulungiswa kwenkqubo kakuhle. Ukuhlolwa kweentsimbi, iindawo zokuphosa, iincakuba zomoya, izixhobo zokubasa zenyukliya kunye nezinto ezichanekileyo kumashishini nakwezinye iinkalo, ukufumanisa iziqhushumbisi.
Uhlalutyo lwe-activation ye-neutron (NAA) yahlukile kwimifanekiso ye-neutron kwaye isebenza ngendlela efanayo nemodyuli ye-DAN yeMinqweno. Inkqubo yezomkhosi yase-US i-NEMESIS (inkqubo ye-neutron emission mobile explosive sensing kunye nenkqubo yokwazisa) yenye yazo, ukwenza ukusetyenziswa kwezixhobo ezincinci kube lula, iyakwazi ukubona isixhobo esineziqhushumbisi (IED) kunye nemigodi yeziqhushumbisi, kunye nomtshini wesinyithi kunye nomhlaba. iradar yokungena (GPR) yokufumana simahla kwimigodi yesinyithi.
I-Phoenix LLC, ebandakanyekayo kwiprojekthi ye-NEMESIS, ikholelwa ekubeni i-NAA kunye nezixhobo zokucinga ze-neutron zingasetyenziswa kwixesha elizayo kungekuphela nje kwimisebenzi eyingozi, kodwa nakwimisebenzi yesiqhelo efana nokuhlolwa kwebhulorho kunye nokuhlolwa kwee-avionics. yomgudu ngoku ijolise ekuphuculeni ubuchwephesha bokubona kunye nokwenza izixhobo zomelele ngakumbi kwaye zifikeleleke.
Ngelixa okuninzi koku kunokuvakala kuyinto emnandi kakhulu, njengokukwazi 'ukubona' emhlabeni, ukufumana iziqhushumbisi ezingcwatyelweyo, okanye ukubona iintanda kwii-turbine blade okanye kwi-weld seams, umntu unokuyibona njengenkqubela phambili kubuchule obuqhele ukusetyenziswa njengeX-reyi Ukusukela kwinkulungwane yama-20, ii-X-reyi kunye nezinye ii-radiation kuye kwafumaniseka ukuba kulula ukuvelisa, kodwa inkqubo yokuvelisa inani elikhulu lee-neutron ngendlela eyiyo ngaphandle kwesidingo se-reactor fission yenyukliya iphuculwe kancinci kumashumi eminyaka.
Isixhobo se-fusion esingatywinwanga, ukubonelelwa okuqhubekayo kwe-deuterium-tritium (okanye i-deuterium-deuterium) ipetroli ayifuni kulungiswa, ngaphandle kokubuyiselwa kwezinto ezivelisa imitha yomenzi wenkunkuma. La malungu ngawenkunkuma eqhumayo nephakathi kwinqanaba eliphakathi, efanayo nenkunkuma eveliswa kwiilabhoratri nasezibhedlele kwaye kulula ukuyilahla.
Nangona izixhobo zokukhangela eziphathwayo ezisebenzisa imithombo ye-neutron kuhlalutyo lokusingqongileyo zisekude, ukucinga nge-neutron kunokubuphucula ubomi ngeendlela ezininzi, njengoko kwenza iX-reyi.
Iingxaki zobuchwephesha ziya kusonjululwa kwisicelo sokukhusela imitha kwi-teknoloji yenyukliya 1) Uyila njani i-8% ye-boron-containing polyethylene board; (2) Uyenza njani i-boric acid kunye ne-polyethylene inyibilike kubushushu obufanayo kwinkqubo, kwaye ungenzi i-metaboric acid kunye ne-pyroboric acid, ukuze kube lula ukudibanisa, ukufudumeza, ukuphuma kunye nokuqengqeleka. 1. Ngokwendlela yemichiza eyi-H3BO3 kunye nobunzima be-atomic ye-boric acid, ipesenti ye-boron ibalwa njenge-17.48%, kwaye ke ipesenti yobunzima be-boric acid kufuneka idityaniswe kwi-100 kg ye-boron equkethe i-polyethylene ibalwa ukuba ibe ngama-46% , Kwaye i-8% ye-boron equkethe ibhodi ye-polyethylene yenzelwe. 2, ukukhula kobushushu be-asidi ye-boric kungaphakanyiswa okwethutyana ukuya kwi-120 ℃ ngaphandle kokubola kwe-arhente enokuxazululeka, kodwa kunokunciphisa indawo yokunyibilika kwe-polyethylene ephezulu ukuya kwi-120 ℃ B, enokucombulula ingxaki ye-boric acid coking. Izicelo: ukukhuselwa kwemitha ye-neutron kwizikhululo zamandla zenyukliya, izikhulisi zamandla eziphakathi (eziphakamileyo), izixhobo zamandla eatom, iinkwili zenyukliya, izinyusi zonyango, izixhobo zonyango lwe-neutron kunye nezinye iindawo.
Inkampani yethu igxile ekuveliseni iphepha le-polyethylene, i-boron polyethylene sheet kunye nezinye iimveliso. Sinako ukwenza processing CNC ngokungqinelana imizobo. Umxholo we-boron uhluka kwifom ye-2% ukuya kwi-50%. Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi!
Ixesha Post: Jul-23-2021
Lwedilesi: Dacao Industrial Park, Ningjin County, Dezhou City, kwiPhondo Shandong, China.
Ifowuni: +86 532 8388 6605